Moya China IiCaps zoNyango eziLahliweyo Ngomzi mveliso weClip Cap kunye nababoneleli |Zhongxing
IiCaps zoNyango eziLahlwayo ezineClip Cap
SHAOHU@ iMedcial Cap enomgangatho ophezulu :lo mnqwazi ongalukwanga [ongasebenziyo] wenziwe ngematyerial esemgangathweni , akukho vumba lingaqhelekanga, usempilweni kwaye uthambile , uqinisekisa ukuba uyawusebenzisa .Uyakhululeka kwaye uyaphefumla : iikepusi ezilahlwayo zinobunzima obuphezulu kwaye ziyaphefumla. ,engasoze ivumele intloko ukuba ivakale i-muggy.Iyanwebeka kwaye ilungelelaniswe i-Lour i-mob caps ene-elastic band iyenza ilingane kakuhle nentloko yakho,engayi kwenza ukuba intloko yakho ivakale iqinile kwaye ibophelelekile.Isebenza ngokubanzi:lo mnatha weenwele unokusetyenziselwa ikhaya, isibhedlele, i-spa, isalon, imboni yenkonzo kunye nendawo yokusebenza engenathuli, ayizokoyika ukulahleka kweenwele ngengozi.
1.Mterial: PP ayilukwanga, ilaphu elingalukwanga, ipolyproplene
4. Uhlobo lwe-Disinfecting: Ayinyumba
Ngaphezulu kweminyaka eyi-10 yophuhliso, iqela leZHONGXING ligxile ekuveliseni nasekuthumeleni kumazwe angaphandle uthotho lweemveliso zeMedical Cap.
Sijonge phambili ekwakheni ubudlelwane boshishino kunye negalelo labantu, kunye nawe kunye.
Iikepusi zonyango ezilahlwayo zinezi mpawu zilandelayo:
1.yenziwe ngelaphu lepolypropylene elingalukiweyo elingenatyhefu kunye nelastiki eyomelezwe kabini yetekhnoloji ye-thermosynthetic yesandi esinamandla, imveliso ithambile, yomelele kwaye intle;
2.ukusetyenziswa okulahlwayo, ukucoceka kunye nokucoceka, kulula kwaye kulula, ukuphepha ngokufanelekileyo ukusuleleka kwintsholongwane;
3.ukuphefumla, uthuli, kunokuthintela ngcono uthuli kunye ne-microorganism;
4.Ingahlanjwa, ayinakugcinwa, iluncedo kwaye iyasebenziseka;
5.Musa ukunxiba ixesha eliqinileyo, akukho kusabela komzimba
Iikepusi zonyango ezilahlwayo
Ukusetyenziswa kwexesha elinye lee-caps zonyango 100 iiphakheji
5.Musa ukunxiba tightixesha, akukho ukusabela komzimba
Umnqwazi wezoNyango oLahliweyo Iinwele ezingalukwanga i-Ce Strip Mob Mob Cap Surgeon Ikliphu yokuTyandwa kweNtloko iBouffant Cap yoNursing Net kuShishino lokuTya
18"/19"/20''/21''/24'' okanye nayiphi na into oyifunayo
10gsm, 12gsm, 14gsm, 16gsm, okanye nayiphi na oyifunayo
100pcs / bag, 2000pcs / ibhokisi
mhlophe, luhlaza, luhlaza, pink, mnyama, njl
Isampulu & OEM
Ngaphambili: Eyona ithengiswa kakhulu eTshayina iSetyenzise into enye eSibhedlele iBhedi yeBhedi yoNyango engangenwa ngamanzi kwiBhedi yeBhedi yeeSeti zeShiti
Okulandelayo: IGauze yezoNyango eLahliweyo yeCopmress yoMqhaphu iGauze iSpuare Pad 100% iAbsorbent
Ukuvala inzala Medical Cap
I-White Medical Cap
Ffp1 Imaski elahlayo, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Umsebenzi Wemaski, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator, Iimaski ezi-3 eziLahlwayo ngeFda, Mask Njengobuso,